Tetikasa Rocade Atsinanana : Natomboky ny Filoha ny asa fanamboarana -
AccueilRaharaham-pirenenaTetikasa Rocade Atsinanana : Natomboky ny Filoha ny asa fanamboarana
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana eto amin’ny firenena ataon’ny Fitondram-panjakana, tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tafapetraka omaly, teny By-Pass mantsy ny vato fototra amin’ny fanombohana ny asa, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasa fanitarana an’Antananarivo na ilay adika amin’ny teny vahiny « Grand Tanà ».
Araka izany, dia tonga nanotrona sy nanatanteraka ny lanonam-pametrahana ny vato fototry ny tetikasa Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanan’Antananarivo ny Filoham-pirenena, notronin’ireo mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian.
Fantatra nandritra izany fa lalam-pirenena goavana miisa efatra eto amin’ny firenena no hampifandraisina sy hampitohizin’ity tetikasa goavambe ity, dia ny RN2 sy RN7 ary ny RN3 sy ny RN4, izay mandalo na/sy mihaona amin’ny lalana Marais Massay.
Voalaza ihany koa fa vola mitentina 62 tapitrisa Euros avy amin’ny mpiara-miombon’antoka, toa ny vondrona eoropeanina, ny Banque Européenne de Développement na BEI, ny Agence Française de Développement na AFD, ankoatra ny avy amin’ny fanjakana malagasy, no ahafahana manatanteraka io fotodrafitrasa goavana Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanana io.
Ankoatra izay raha ny fanazavana, dia haharitra 32 volana na manodidina ny telo taona latsaka kely eo ho eo no hanatanterahana ny asa fanamboarana.
Nohamafisin’ny Filohan’ny Repoblika kosa fa mbola tsy nisy tetikasa goavambe toa io tetikasa Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanana io hatramin’ny Fitondrana nifandimby teto Madagasikara.
Marihina mantsy fa anisan’ny lalana manara-penitra eto an-drenivohitra sy manodidina izy ity satria ankoatra ny lalana fampiasa na fandehanan’ny fiara, dia ahitana lalana natokana ho an’ny mpandeha am-bisikileta sy lalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra izy io. Araka ny fantatra ihany koa dia mirefy 8 265 km ny halavan’ity lalam-baovao ity ary ahitana tetezana miisa roa, izay mirefy 56 m eny amin’ny faritra Soamanandrariny. Hisy fihaonana goavana vao hoforonina miisa efatra ihany koa amin’izany, izay eny amin’ny Marais Massay, Nanisana, Ambohimahitsy ary Amoran’Akoana.
Ankoatra izay, ahitana toeram-piantsonana ho an’ny fitateram-bahoaka miampy trano voatokana ho fiandrasana taksibe ny fotodrafitrasa. Manaraka izany, hisy asam-piarahamonina ihany koa amin’ireo fokontany miisa 11 lalovan’ity asa fanamboaran-dalana ity, toa ny fananganana toeram-panasan-damba, toeram-pidiovana ho an’ny mponina, sns.
Anisan’ny tetikasa goavana tafiditra indrindra amin’ny vina « Fisandratana 2030 » ny fananganana ity Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanana ity.